आफ्नै आङको जुम्रा देख्ने कि ? « News of Nepal
आफ्नै आङको जुम्रा देख्ने कि ?
पत्रकारभन्दा बढी पत्रुकार बन्नेहरूको जमात बढिरहेका बेला पत्रकारलाई लगाम लगाउने कुरोले बजार पिट्या छ। पत्रकारितालाई कला, सीपसहितको व्यवसाय पनि भनिन्छ। तर सार्वजनिकभन्दा व्यक्तिगत व्यवसायमा छलाङ मार्ने पत्रुकारले सच्चा र इमानदार पत्रकारलाई सोझै ओझेल पारिराख्या छन्।
अरू सबै खत्तम आफू मात्रै ‘असली’ दाबी गर्ने पत्रुकारको झुण्ड बढिराख्या बेला संसद्मै पत्रकारलाई लगाम लगाउने कुरो उठ्या छ। पत्रकारिता गर्न स्नातकसम्मको शैक्षिक योग्यतासहित अनिवार्य लाइसेन्स उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदले माग गरेका हुन्। एक पत्रकार एक अनलाइनको खहरे चलिराख्या बेला शैक्षिक योग्यताको प्रसङ उठाउने संसद्को कुरो सोह्रै आना ठीक हो।
पत्रकारिताका कखरा बताउन अइँअइँ पर्ने, कनिकुथी कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्या, केही त १२ मा पनि नचढ्याहरू धमाधम अनेक थरी डटकमवाला अनलाइनका सम्पादक हुन थालेसी पत्रुकारिता मौलाउने नै भो। लगाम कसिलो गर्ने हो भने पत्रकारिता अझ विश्वसनीय हुन्छ, गुणस्तरमा कुनै शंका रहन्न। त्यस्तै चुरो कुरो बुझेर होला संसद्मा कुरो उठ्या छ।
संसद्मा पत्रकारको योग्यताको कुरो उठिराख्या बेला सांसद, नेता अनि मन्त्री बन्नका लागि शैक्षिक योग्यताको बहस पनि चल्छ कि ? नीति निर्माण तहमा रहने सांसद अनि मन्त्रीहरूको शैक्षिक योग्यता अच्छा भए मुलुकले छिट्टै आर्थिक छलाङ माथ्र्यो कि ? आफ्नो आङमा जुम्रा नदेख्ने अरूको आङमा भैंसी भनेजस्तो चाहिँ नहोस् है !
भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा टाउको बिनाको शव भेटियो
लकडाउन अवज्ञा गर्दै अत्यावश्यक सामग्रीको नाममा..
ललितपुर महानगरद्वारा पाटन अस्पताललाई मेडिकल सामग्री..
काठमाडौँ महानगरले छाडा चौपाय र पंक्षीलाई..
मध्यविन्दुमा १ सय १० क्वारेन्टाइनमा
हामी सरकारको निर्णय मान्छौं तर हाम्रो माग पुरा गर्नुपर्छ : निजी विद्यालय
धुलिखेल अस्पतालमा कोरोना आशंकामा ५ भर्ना, दुईको रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’, बाँकी परिक्षण हुँदै
स्पेनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७ हजार ३४० पुग्यो, १० नेपाली अस्पताल भर्ना
लकडाउन बढाउने योजना छैन : भारत
भुटानले पनि ‘लकडाउन’ को अवधि लम्ब्याएर २१ दिन पुर्‍यायो
लकडाउन अवज्ञा गर्दै अत्यावश्यक सामग्रीको नाममा मदिरा ओसारपसार